Wararkii ugu dambeeyey dib u bilaabashada doorashada Golaha Shacabka ee BF | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyey dib u bilaabashada doorashada Golaha Shacabka ee BF
Wararkii ugu dambeeyey dib u bilaabashada doorashada Golaha Shacabka ee BF
Muqdisho (Dalkaan.com) – Waxaa Maanta lagu wadaa ina ay Soomaaliya ka bilaabanto doorashii xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo hakad galay, hase yeeshee sida lagu wado haatan ay tahay in la soo gabogabeeyo 25 Bisha February ee soo socota.
Dhanka kale, waxa iyaguna Maanta iska dhex dooranaya guddoomiye cusub guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer Federal kadib markii Guddiga doorashooyinka ay xilka ka qaadeen Guddoomiye Maxamed Xasan Cirro, iyaga oo ku eedeeyey shaqo gudasho la’aan iyo ku milmidda siyaasadda.
Sidoo kale Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Gobolada Waqooyi-Somaliland ayaa Shaaciyay odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee soo xulayaa ergada.
Guddiga ayaa shaaciyay odayaasha dhaqanka iyo xubnaha soo xulaya ergada Lix kursi oo ka mid ah golaha Shacabka.
Halkaan hoose ka akhriso odayaasha dhaqanka iyo xubnaha soo xulaya ergada Lix kursi oo ka mid ah golaha Shacabka – Somaliland
Kylian Mbappe oo loo magacaabay ciyaaryahanka sannadka ee abaalmarinta Globe Soccer...
FIQI oo afar qodob ka soo saaray Galmudug, kadibna weerar ku...
Afarta kooxood ee Premier League oo kula Tartamaya Arsenal ciyaaryahanka khadka...
Brighton 4-0 Manchester United: Reds oo Xasuuq loo geestay